Hoyga Xamar: Muran ka taagan Iskuul la burburiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa saakay kula jarmaaday burburin Iskuulka hoose, Dhex iyo Sare ee Hoyga Xamar ee ku yaalla waddada Cabdiqaasim ee ka soo baxda KM4 aaddana dhanka Tarabuunka ee Degmada hodan
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka iyo Ardayda Iskuulaka ayaa saakay waqti hore ka war helay ciidamo dul dhooban Iskuulka oo wata gaadiidka lagu burburiyo dhismayaasha kuwaas oo markiiba billaabay in ay dhulka dhigaan qeyb ka mid ah dhismaha Iskuulaka.
Dood iyo dacwo muddo soo jiitameysay ayaa ka taagneyd dhulka uu ku yaallo Iskuulku, waxaana sheegtay qoys ku andacooday in Dowladdii Siyaad Barre ay uga qaaday dan guud, haddana u baahan yihiin dhulkooda maadaama aysan Dowladdu ku shaqeysan.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa bishii Maarso ee 2020 u xukuntay dhulka qeyska sheegtay in dan guud looga qaaday waxaana la amray Maamulka Iskuulku in ay wareejiyaan dhulka.
Iyadoo la fulnayo amarka Maxakamadda ayaa saakay Ciidamada Boolisku burburinta ku billaabeen Iskuulka, hayeeshee markii ay arrintaas dibadda u soo baxday Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ayaa sheegtay in dhulkaas uu yahay dan guud oo aysan cid gooni ah lahayn.
Hayeeshee, Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo Dowladdu u xir sartay dhacdada ay ciidamada uu masuulka ka yahay ku lug yeesheen, ayaa sheegay in wixii dhacay ay ahaayen qalad.
Taliye Xijaar wuxuu sheegay in tallabo sharci ah laga qaadi doono dadkii ku lugta lahaa falkii lagu burburiyay Iskuulka isla-markaana kaliya Ciidamada Boolisku aysan falka fulin ee ha’ado kale oo dowli ah ku lug leeyihiin.
Xijaar wuxuu sheegay in Dowladdu haddi ay u baahato Iskuulka ay si sharci ah u soo doonan doonto, wixii ka horreeyana ay sii maamuli doonaan Maamulka Iskuulka Hoyga Xamar.
Agaasimaha Waxbarashada Gobolka Banaadir Cabdiraxmaa Cumar Nuur ayaa sheegay in Wasaaradda Wax-barashadu ay dhisi doonto wax kasta oo laga burburiyay Iskuulka, si dib loogu billaabo adeegyadii wax-barasho ee ka socday.
Hoyga Xamar waxa uu ka mid yahay Iskuulada Ugu muhiimsan hadda Magaalada Muqdisho waxaana wax ka barata Kumanan arday ah, wuxuuna hoos tagaa daladda SAFE iyo Wasaaradda Waxbarashada ee XFS.